Fanampiana isan-tokatrano :: Hiverina ny fizaràna Vatsy Tsinjo eto Antananarivo • AoRaha
Tara kely iray andro ny daty voafaritra hiverenan’ny fizarana ny fanampiana Vatsy Tsinjo eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Rahampitso, alarobia, fa tsy anio, araka ny vinavina taorian’ny fampiatoana ny hetsika, no hanomboka hisitraka an’ireo vary sy menaka ary siramamy sy legioma maina, miaraka amin’ny tambavy fonosana Covid-organics, ireo mponina tsy mbola nahazo izany.
Ny fihemoran’ny asa fanisana an’ireo mponina tokony hisitraka ny Vatsy Tsinjo, izay ataon’ireo ekipan’ny minisitera tsirairay sy ireo olon’ny faritra Analamanga ary ny ekipan’ ny kaominina Antananarivo renivohitra no nampihemotra kely an’io andro hiverenan’ ny fizaràna ny Vatsy Tsinjo io.
Betsaka ny fanampiana
Tamin’ny alalan’ny hafatra fohy tamin’ny finday, omaly alina, no nampahafantaran’ny governoran’ny faritra Analamanga, Rasoamaromaka Hery fa: “hiverina amin’ny alarobia ho avy izao ny fizaràna ny sosialim-bahoaka eto Antananarivo renivohitra sy ny faritra manodidina azy. Hitohy hatrany ny fidinana eny anivon’ ny fokontany amin’ny fanangonana ny mombamomba ny olona izay harafitra ao anatin’ ny “base de donnée” isampokontany ».
Tsy tratra tao anatin’ny efatra andro, izay nifarana, omaly, ny fitetezana an’ireo tokantrano teto an-drenivohitra. Nambaran’ ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina sady mpitondra tenin’ny governemanta, Andriatongarivo Lalatiana, omaly, fa: “ manodidina ny 70 isanjaton’ireo tokantrano 24 000 tokony ho notsidihana sy hanaovana ny firaketana antsoratra no vitan’ireo minisitera isan-tsokajiny, hatramin’ny omaly”. Tsy maintsy mbola tohizana, hoy izy, ny fanisana sy ny fanadihadiana atao amin’ ireo tokantrano rehetra.
Nanamafy hatrany ny governoran’Analamanga fa: “hahazo ny sosialim-bahoaka avokoa ireo tokantrano tokony hisitraka an’izany satria ampy tsara ny fanampiana”.
Isan’ny anjara andraikitry ny ekipan’ny faritra sy ireo kaominina eto Analamanga ny fitetezana vakim-paritra isampokontany, ka anaovana ny fanamarinana izay arakitra an-tsoratra momba an’ireo tokantrano tokony hahazo ny fanampiana. Manaraka akaiky an’izany koa ireo sefo fokontany eny ifotony.